Faah faahin:- Weerar aad u culus oo saqdii dhexe xalay lagu qaaday guryo ku yaala magaalada Mandheera – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar aad u culus oo saqdii dhexe xalay lagu qaaday guryo ku yaala magaalada Mandheera
Waxaa faah-faahin dheeraad ah laga helayaa weerar culus oo isugu jiray qaraxyo iyo rasaas oo saqdii dhexe xalay lagu qaaday guryo ay degan yihiin dad Kenyaan ah oo ku yaala bartamaha magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Weerarkaasi oo u muuqday mid qorsheeysan ayaa sida la sheegay geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad Kenyaan ah oo aan u dhalan magaaladaasi Mandheera kana yimid magaalooyinka kale ee Kenya, waxaana xilliga uu weerarka dhacaacayay sidoo kale la maqlay rasaas aad u badan.
Sidoo kale, illaa 5 qarax oo waaweyn ayaa weerarkaasi loo adeegsaday, waxaana inta la xaqiijiyay weerarkaasi ku geeriyootay 12 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay 20 qof kale.
Dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Mandheera, halkaasi oo dhamaantood haatan lagu daaweynayo dhaawacyadooda.
Kooxihii weerarka kusoo qaaday guryahaasi ayaa la sheegayaa inay goobta isaga baxsadeen, waxaana weerarka kadib goobtaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyo booliska ee magaalada Mandheera.
Saraakiisha ciidanka booliska ee dalka Kenya oo warbaahinta kula hadlay goobta uu weerarka ka dhacay ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyaan dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab, oo uljeedkoodu yahay dhibaateynta shacabka Kenyaanka ah.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi, marka laga soo tago eedeymaha ay jeedinayaan saraakiisha ciidanka booliska Kenya, waxaana magaalada Mandheera saakay ka socdo howlgalo balaaran oo ay ciidanka Kenya ka wadaan xaafadaha magaaladaasi.
Si kastaba ha ahaatee, weerarada ceynkaan oo kale ayaa inta badan magaalooyinka Kenya ka geysta xubnaha ka tirsan Al-shabaab, mana ahan weerarkii ugu horeeyay oo ay Al-shabaab ku qaadaan deegaano ku yaala dalka Kenya, gaar ahaan deegaanada gobolada Waqooyi Bari Kenya, iyadoona weerarkaan uu noqonaayo weerarkii labaad muddo bil gudaheed ah oo ka dhacay dalkaas.